हिमाल खबरपत्रिका | 'भौगोलिक संघीयता नै उपयुक्त'
'भौगोलिक संघीयता नै उपयुक्त'
प्रा. टंकबहादुर सुब्बा, मानवशास्त्री
सबैको अवस्था उस्तै छैन। खासगरी अनपढ, गरीब र अल्पसंख्यामा रहेका नेपालीभाषीको अवस्था टिठलाग्दो छ। दार्जीलिङ, सिक्किम जस्ता ठाउँमा प्रवासी भने पनि उल्लेख्य संख्या भएकै कारण नेपालीभाषीलाई कसैले छुनेसम्म आँट गर्दैन। नयाँदिल्ली, बैंगलोर जस्ता ठूला शहरमा पनि नेपाली छन्। सेना, प्रहरीबाट निवृत्त भएर 'सेकेण्ड करिअर' मा जागिर खानेहरू पनि छन्।
९५ प्रतिशत नेपालीभाषीमा मिलेर बसौं भन्ने भावना हुन्छ। तर पाँच प्रतिशत, खासगरी युवाहरूले विचार नपुर्‍याउँदा दंगा–फसादको निहुँ बन्छ। रक्सी, केटी र धर्म झ्ागडाका बीउ बन्ने गरेका छन्।
सन् १९८६/८७ तिर उत्तरपूर्वी भारतबाट दशौं हजार नेपालीभाषी लखेटिए। त्यसको जड रक्सी नै थियो। नबिनसङ भन्ने सानो ठाउँमा नेपालीभाषी र स्थानीय खासी मिलेरै रक्सी खाएछन्। रक्सी लाग्दै गएपछि उनीहरू कसको भगवान ठूलो भन्ने विवाद गर्न थालेछन्। 'तिमीहरूको भगवान ठूलो हो भने हेरौं के हुँदोरहेछ' भन्दै एउटा खासी केटाले मन्दिरमा पिसाब फेरिदिएछ। नेपालीले पिसाब गर्ने खासीलाई ठाउँमै छिनाएछन्। अनि हो, घटनाले रौद्ररुप लिएको।
आसाममा सन् १९७९ मा गठित अल आसाम स्टुडेन्ट युनियन (आसु) ले 'एन्टी फरेनर्स मूभमेन्ट' चलायो, जहाँ नेपालीभाषी विद्यार्थी पनि सदस्य थिए। शुरुमा यो अभियान बंगलादेशी विरुद्ध हो भनियो। तर, जब आन्दोलन छेडियो, नेपाली पनि घानमा परे। सन् १९७९–१९८५ बीचमा धेरै नेपाली स्थानीयबाट खेदिए।
त्यसको मुख्य कारण इर्ष्या नै हो। नेपालीले उन्नति, प्रगति गरेको स्थानीयलाई नपच्ने रहेछ। गाडी किन्दा पनि स्थानीयलाई मन नपर्ने रहेछ। अरुका हकमा पनि यस्तै देखियो, सन् १९६० को दशकमा ग्रीन रिभोलुसनपछि शिखहरूले गाडी चढ्ने, केटी जिस्क्याउने हैसियत बनाए। त्यसपछि नै १९८४ को नयाँदिल्लीमा 'एन्टी शिख मूभमेन्ट' चल्यो।
हाम्रा सम्बन्धका आधार भनेका भाषा, धर्म, संस्कृति र इतिहास हुन्। १९७० सम्म हामीमा भारतीय हौं भन्नेमै जोड देखियो। नेपालसँग सरोकारै छैन, सम्बन्ध नै छैन भन्ने प्रवृत्ति पनि थियो। खासगरी मध्यमवर्गीय बुद्धिजीवी नेपालबाट टाढिने मूडमा थिए। 'नेपालले हेप्छ, नोकरी पाउँदैन' भन्नेसम्मको झूटो प्रचार पनि तिनैले गरे। भारतको स्वतन्त्रता अभियानमा धेरै नेपालीको सहभागिता थियो। उनीहरूमा अति राष्ट्रवादी भावना त हुने नै भयो।
सन् १९७९ मा प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाईले 'नेपाली भाषाको माग किन गर्छौ? त्यो त विदेशी भाषा हो' भनेदेखि नेपालीभाषी भारतीय नेपालसँग नजिकिन चाहेको देखियो। 'भारत नै हाम्रो मातृभूमि, पितृभूमि हो, ज्यान दिन तयार छौं' भने पनि भारतले हामीलाई भारतीय मान्दो रहेनछ भन्ने कुराको महसूस गर्न थाले। त्यसपछि नै हो भारतका धेरै नेपालीभाषी काठमाडौं आएर शिक्षा, संगीत जस्ता क्षेत्रमा काम गर्न थालेका।
प्रशान्त तामाङको उदाहरण हेरौं। तामाङलाई 'इन्डियन आइडल' जिताउन नेपालीभाषीले भोट हाल्छन् भनेर मेघालयमा भोट हाल्नै दिएनन्। कति ठाउँमा त घरको टेलिफोन लाइन नै काटिदिए। जबकि नेपालमा उनलाई भोट हाल्ने अभियान नै चल्यो। यो घटनाले पनि नेपालभित्र र बाहिरका नेपालीबीच निकटता ल्यायो जस्तो लाग्छ। नेपालमा गएको भूकम्पमा सिक्किम, गान्तोक, दार्जीलिङतिरका नेपालीभाषीमा सहयोगी भावना देखियो।
जसरी 'हामी भारतीय नै हौं, नेपाली होइनौं' भनिरहेका छौं, त्यसरी नै मधेशवासीले पनि 'हामी भारतीय होइनौं, नेपाली नै हौं' भनिरहेका छन्। यस अर्थमा हामीबीच समानता देखिन्छ। नेपालमा मधेशीमाथि अत्याचार भयो भने उता हामीमाथि पनि अत्याचार हुन्छ। भारतमा हामीले नेपाली भाषाको माग गर्दा 'नेपालले चाहिं हिन्दीलाई मान्यता नदिने हामीले चाहिं किन नेपालीलाई दिनुपर्ने?' भन्ने सम्मका कुरा उठे।
नेपाल संविधान निर्माणको चरणमा छ, यतिवेला मेरो सुझाव चाहिं जाति, भाषा, संस्कृतिको संरक्षण हुने गरी भौगोलिक आधारमा प्रदेश बनाउनुपर्दछ भन्ने हो। यसलाई 'इथ्निक् फेडरालिज्म् विदिन टेरिटोरियल फेडरालिज्म्' भनेर बुझ्ो पनि हुन्छ।
'अरु जाति जतासुकै जाउन्, हाम्रो मात्रै मनपरी चलोस्' भनेर कसैले भनेका छैनन्। तसर्थ, त्यति ठूलो समस्या देख्दिनँ। कतिपय विषय क्षेत्र, जात, धर्मको हितमा नहोला तर त्यो राष्ट्रिय हितमा हुनुपर्दछ। राष्ट्रिय हितका लागि मसिना हित त्याग्न सक्नुपर्दछ।
अनिश्चितताले लामो घेर्दा त्याग्न चाहेका–लागेका कतिपय व्यवस्थाहरूले फेरि शिर उठाउने मौका पाउँछन्, जुन नेपालमा शुरू भइसकेको छ। अतः आज नेपाल देशअघि कुनै अत्यावश्यक कार्य छ भने त्यो हो, अनिश्चिततादेखि बाहिरिनु। त्यसो हुन नसके 'देश वासीका निम्ति वा वासी देशको निम्ति' भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। वासी नै नरहे देश रहन्न, तर विना देशको वासी हुन्छन्, यद्यपि विना देशको नागरिक भने हुँदैन।
नेपाली आफंैमा मग्न हुने जाति हो, मूर्खलाई बुद्धिमान अनि गरीबलाई धनवीर नाम दिएर ढुक्क हुने जाति। दोहोरो हामी कम सोच्छौं। भविष्यवाणी गर्छौं तर भविष्यबारे कमै सोच्छौं। समालोचना गर्नेलाई शत्रु ठानिहाल्छौं। तर, आजको नेपालको हल यही जातिबाट निस्कनेछ। त्यो हल आकाशबाट टप्कने होइन, न उत्तर वा दक्षिणको हावासँग उडेर आउने हो। हल यहाँकै माटो र हावापानी सुहाउँदो हुनुपर्छ। आज नभए भोलि त्यो हुन कर लाग्नेछ।
अनिश्चितताबाट बाहिरिन आफ्ना जाति र देशप्रतिका कतिपय धारणा जति सजिलै त्याग्न सक्यो त्यति नै फाइदामन्द हुन्छ। नेपालीलाई 'वीर गोर्खा' भनेर अंग्रेजले सर्काउनसम्मै सर्काएर पुस्तक, लेख नलेखेका होइनन्। तर त्यसैलाई ध्रुवसत्य मानेर गजक्क हुन आजको नेपाली जातिलाई सुहाउँदैन। नेपाललाई कुनै विदेशी शक्तिले कहिल्यै अधीनमा ल्याउन सकेन भनेर गर्व नगरेर उपनिवेशवादले लिएको नयाँ अनि अदृश्य रूप देख्न सक्नुपर्छ। पहाड–मधेशको दूरत्व, स्त्री–पुरुष उँचनीच र जातपातको भेदभाव हटाउन नसके पनि कोशिश गर्नुपर्छ। तब नेपाल गर्व गर्न लायक हुन्छ।